သင်၏ Android ဖုန်းကိုဆိုက်ဘာခြိမ်းခြောက်မှုများမှကာကွယ်ရန်နည်းလမ်း (၈) ခု | Androidsis
Miguel Gaton | | လုံခွုံရေး
မင်းအားလုံးကိုသတိထားမိလား သင်၏လက်ကိုင်ဖုန်းတွင်သိမ်းဆည်းထားသောဒေတာနှင့်လျှို့ဝှက်အချက်အလက်? ဓာတ်ပုံများ၊ ဗီဒီယိုများ၊ သင်၏အင်တာနက်ကြည့်ရှုခြင်းသမိုင်း၊ စာတိုများနှင့်လျှို့ဝှက်စကားဝှက်များပင်ပါဝင်သည်။ သင်၏ဖုန်းသည်သူခိုးများနှင့်ဟက်ကာများအတွက်အလွန်တန်ဖိုးရှိသောကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်စိတ်မပူပါနဲ့။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, အချို့ရှိပါတယ် သင်၏အချက်အလက်များကိုကာကွယ်ရန်သင်လုပ်နိုင်သောအရာများ ဆိုက်ဘာခြိမ်းခြောက်မှုများ။ သတိပြုပါ။ အောက်မှာသင့်ရဲ့ Android ဖုန်းကိုလုံခြုံအောင်ထိန်းသိမ်းရန်အလွန်အသုံးဝင်သောအချက် ၈ ချက်ကိုငါပေးမည်။ ပြင်ဆင်ပြီးပြီလား အဲ့ဒီနေရာကိုသွားရအောင်!
1 ၁။ အလွန်အားကောင်းတဲ့စကားဝှက်တစ်ခုသတ်မှတ်ပါ
2 ၂။ VPN တစ်ခုကိုသုံးပါ
3 သင်၏မိုဘိုင်း operating system ကို update လုပ်ပါ
4 ၄။ လျှောက်လွှာတင်ခြင်းကိုသတိပြုပါ
5 ၅။ လျှောက်လွှာများကိုသင်ခွင့်ပြုချက်ကိုစောင့်ကြည့်ပါ
6 ၆။ သင်၏လက်ကိုင်ဖုန်းတွင်ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးဆော့ဖ်ဝဲလ်ထည့်သွင်းပါ
7 ၇။ လက်ကိုင်ဖုန်းကို encrypt လုပ်ပါ
8 ၈. Google Play တစ်ခုသာ download ရယူပါ
မည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက် ၀ င်ရောက်မည်ကိုစိုးရိမ်သောကြောင့်သင်၏တံခါးကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ချန်ထားမည်မဟုတ်လော။ ကောင်းပြီ၊ ဒါကခင်ဗျားရဲ့မိုဘိုင်းနဲ့လုပ်နေတာပဲ သင်ကခိုင်မာတဲ့စကားဝှက်မသတ်မှတ်လျှင်။ ကျွန်ုပ်၏ပထမ ဦး ဆုံးအချက်မှာ crack ရန်လွယ်ကူသောလျှောကျမည့်ပုံစံအစား PIN နံပါတ်သို့မဟုတ်စကားဝှက်ကိုထည့်ခြင်းဖြင့်သင်၏ Android ဖုန်းတွင်လုံခြုံရေးပထမအဆင့်ကိုထားရန်ဖြစ်သည်။
၂။ VPN တစ်ခုကိုသုံးပါ
una Android အတွက် VPN ၎င်းသည်ဟက်ကာများနှင့် ransomware တိုက်ခိုက်မှုများကိုဖယ်ရှားပစ်နိုင်သည်။ VPN သင့်ရဲ့ privacy ကိုကာကွယ်ပါ သင့်ဖုန်းနှင့်အင်တာနက်အကြားဥမင်လိုဏ်ခေါင်းတစ်ခုထားခြင်း။ ဤနည်းအားဖြင့်သင်ဖုန်းမှတစ်ဆင့်အများပြည်သူနှင့်ဖွင့်ထားသောဝိုင်ဖိုင်ဖွင့်သည့်မည်သည့်လုပ်ဆောင်မှုကိုမဆိုကာကွယ်လိမ့်မည်။
သင်၏မိုဘိုင်း operating system ကို update လုပ်ပါ
အဆင့်မြှင့်တင်မှုများသည်သင့်ဖုန်းအတွက်စွမ်းဆောင်ချက်အသစ်များပါရှိသော်လည်း၎င်းနှင့်အတူပါလာသည် အရေးကြီးသောလုံခြုံရေးပြင်ဆင်မှုများ။ ထို့ကြောင့်သင်၏ဖုန်းသည်ခေတ်နောက်ကျသွားခြင်းကိုခွင့်မပြုပါ။
နောက်အကြံဥာဏ်ကပေးဆပ်ရန်ဖြစ်သည် သင့်ဖုန်းတွင်တပ်ဆင်ထားသည့် application များကိုဂရုပြုပါ။ ထိုနေရာအများစုမှာထိုနေရာဖြစ်သည် ကို malware ဒါကလက်ကိုင်ဖုန်းတွေကိုအကျိုးသက်ရောက်တယ်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်အချက်သုံးချက်ကိုအကြံပြုပါသည်။
သင်အမှန်တကယ်လိုအပ်သည့် application များသာထည့်သွင်းပါ
sE ခွင့်ပြုချက်ကိုသတိထားမိ သင်၏မိုဘိုင်းလ်တွင် application တစ်ခုကိုထည့်သွင်းသောအခါသင်အဘယ်အရာကိုပေးသနည်း။
အက်ပ်များကိုတပ်ဆင်ပါ Google Play မှသာAndroid အတွက်တရားဝင် app store
ငါဒီခေါင်းစဉ်ကိုအရင်ကဖော်ပြပြီးပြီ။ ဒါပေမယ့်အဲဒါအရမ်းအရေးကြီးတယ်လို့ငါထင်တယ်၊ တစ်ခါတစ်ရံ ကျွန်ုပ်တို့လွှဲပြောင်းနေသည့်လျှို့ဝှက်အချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့မသိပါ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်များပေါ်တွင်သူတို့ကို install ၏အချက်ကိုအဘို့အရာ application များအရသိရသည်အရ။
တစ်ခါတစ်ရံတွင်ကျွန်ုပ်တို့တစ်ခါမျှမသုံးဖူးသောအသုံးအနှုန်းများကိုတစ်ခါတစ်ရံတွင်သာကျွန်ုပ်တို့၏ဓာတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုကြည့်ရှုနိုင်သည်။ ၎င်းကိုသတိပြုရန်မှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ အကယ်၍ သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကုမ္ပဏီများအားဘာမျှမပေးဘဲလွှဲပြောင်းပေးခြင်းကိုမသွားလိုပါကအကောင်းဆုံးဖြစ်သည် သင်၏ Android ဖုန်းတွင်တက်ကြွသောခွင့်ပြုချက်များကိုစစ်ဆေးပါ သင်တပ်ဆင်ထားသည့် application များအတွက်။
၎င်းအတွက်သင်သည် Settings / Application notifications / Application permissions အပိုင်းသို့သွားပါ။ လျှောက်လွှာများနှင့်ခွင့်ပြုချက်များပါသောစာရင်းတစ်ခုကိုသင်မြင်တွေ့ရမည်ဖြစ်ပြီးသင်ပြင်ဆင်နိုင်သည်။
ထိုကဲ့သို့သောလုံခြုံရေး application များရှိပါသည် မိုဘိုင်းဗိုင်းရပ်စ် ၎င်းသည် malware နှင့် phishing တို့မှကင်းဝေးစေရန်သင်၏မိုဘိုင်းပေါ်တွင်လုံခြုံရေးအပိုတစ်ခုထားရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ သင်ထည့်သွင်းထားသောဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးသည်စိတ်ချရသောကုမ္ပဏီဖြစ်ရန်သေချာပါသည်။ အဆိုပါကုစားရောဂါထက်ပိုဆိုးလိမ့်မယ်မဟုတ်ပါဘူး။
သင်၏ဒေတာများကိုသိမ်းဆည်းရန်နှင့်၎င်းတည်ရှိသည့်နေရာကိုပင်ရှာဖွေရန်အတွက်ခိုးယူခြင်းသို့မဟုတ်ဆုံးရှုံးခြင်းခံရလျှင်သင့်လက်ကိုင်ဖုန်းကို ၀ င်ရောက်ခွင့်ပြုသည့်လုံခြုံရေး application များလည်းရှိသည်။
၇။ လက်ကိုင်ဖုန်းကို encrypt လုပ်ပါ
ဒီနေ့ခေတ်မှာဖုန်းတွေမှာ built-in စာဝှက်စနစ်ပါ ၀ င်လာတယ်။ ပြုသောအရာသည် encryption ကိုလုပ်ငန်းစဉ်မှတဆင့်ဖြစ်ပါတယ် ဖုန်းကို data တွေကိုလုံးဝဖတ်လို့မရအောင်ဒေတာသို့ပြောင်းလဲ သင်၏ privacy ကိုအာမခံချက်ပေးရန်
သင်စာဝှက်ရန်စကားဝှက်ကိုသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ဤအချက်ကိုအထူးဂရုစိုက်ရမည်။ အများအားဖြင့်စာဝှက်ဖြင့်ရေးထားသောစကားဝှက်ကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာမှားယွင်းစွာရိုက်ထည့်ခြင်းဖြင့်သင်၏ဖုန်းရှိဒေတာအားလုံးကိုအလိုအလျောက်ဖျက်ပစ်နိုင်သည်။
ဤအရာကို ထောက်၍ ကျွန်ုပ်၏ထောက်ခံချက်သည်သင်အရန်ပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။
၈. Google Play တစ်ခုသာ download ရယူပါ
ကျနော်တို့ဒီအကြောင်းကိုအစောပိုင်းကပြောခဲ့ပေမဲ့၊ ဒီအချက်ကအရမ်းအရေးကြီးတယ်၊ အဲဒါကအဓိကအချက်ဖြစ်သင့်တယ်။ ငါမင်းကိုအကြံပေးချင်တယ် Google Play မှအက်ပ်များကိုသာ download လုပ်ပါ မသိသော (သို့) ပြင်ပကွန်ရက်စာမျက်နှာများမှအပလီကေးရှင်းများကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲခြင်းသည်သင်၏စက်ကိရိယာ၏လုံခြုံရေးကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်စေနိုင်သည်။
နေကောင်းလား သင့်ရဲ့လက်ကိုင်ဖုန်းလုံခြုံရေးကိုအာမခံပေးခြင်း? သင်ယခင်အကြံပြုချက်များမှရွေးချယ်စရာတစ်ခုခုကိုအသုံးပြုပါသလား။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » လဲ tutorial » လုံခွုံရေး » သင်၏ Android ဖုန်းကိုဆိုက်ဘာခြိမ်းခြောက်မှုများမှကာကွယ်ရန်နည်းလမ်း ၈ ချက်